Senbay wepụrụ isi ọdụ ụgbọ elu Istanbul - RayHaber
HomeTurkeyMpaghara Marmara34 IstanbulSenbay, Istanbul Airport Metro Construction
14 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 34 Istanbul, ụgbọ okporo ígwè, General, KENSİÇİ Rail Systems, Isi akụkọ, Mpaghara Marmara, Metro, Turkey 0
Ọdụ ụgbọ elu senbay istanbul siri wee pụọ n'obodo mepere ahụ
Companylọ ọrụ Bayburt Group bụ Senbay Madencilik, otu n'ime ndị mmekọ Gayrettepe-Yeni Airport metro project, nke ga-eweta ọdụ ụgbọ elu na ọdụ ụgbọ elu Istanbul site na etiti obodo, wepụrụ ọrụ ahụ. Baykè Senbay, Kolin, Cengiz na Kalyon were. Mgbe owuwu nke ahịrị ahụ malitere na 2017, a kọwapụtara ụbọchị njedebe dị ka 2017, emesịa njedebe nke 2018, emesịa 2019, ma emesịa 2020, mana dịka taa, 40 emechaala.
Gayrettepe-Yeni Airport na Yeni Airport- nke ga-eweta ụgbọ njem na ọdụ ụgbọ elu Istanbul site na etiti obodo-Halkalı Ọrụ owuwu na-aga n'ihu na-aga n'ihu n'usoro ihe omume ahụ. Companylọ ọrụ Bayrurt Group Şenbay Madencilik ewepụla ọrụ ahụ n'aka ndị mmekọ abụọ na-arụ ọrụ n'ọdụ ụgbọ elu Gayrettepe-Yeni.
Sözcü Çiğdem Toker si akwụkwọ akụkọ 'Gịnị na-eme n'okporo ụzọ ụgbọ elu?' N Kedu ihe na-aga na metro oru dị anyị mkpa iji ruo nnukwu ọrụ obodo nke anyị niile ga-enwe mmasị na ya? Isında ọ rịọrọ maka nnukwu arụmọrụ metro abụọ nwere ọnụọgụ ngụkọta nke 12 ijeri.
na Toker SözcüDị ka ị maara, ị na-ewu ụzọ abụọ nke ga-ebute njem site na etiti obodo gaa n'ọdụ ụgbọ elu Istanbul, ebe ụwa na-ekwo ekworo anyị, na-aga n'ihu: Ogologo oge niile ga-eru 70 km.Halkalı.
Constructionrụ ụzọ abụọ ahụ dị ezigbo anya na usoro mmecha ahụ ekwuputara na mbụ.
M ga-akọpụta mmepe dị mkpa na owuwu Gayrettepe-Yeni Airport, nke Minista nke hasgbọ njem enyeala mmekorita Kolin / Şenbay maka ihe ruru euro ijeri 1 afọ atọ gara aga.
Companylọ ọrụ Bayburt Group Senbay Madencilik, otu n'ime ndị mmekọ abụọ a na-arụ ụzọ ụgbọ oloko na ntanetị kpọrọ dị ka edemede 21 / b nke Iwu Publiczụta Ọha, wepụrụ ọrụ a.
Akara Şenbay Madencilik - nke ị gaghị eju gị anya ma ị mụta - otu ụlọ ọrụ weghaara ya: Kolin, onye otu ya, na Cengiz na Kalyon.
Dabere na ndekọ nke Prolọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ọha na Ọha, ọnọdụ ihe owuwu na ụzọ ụgbọ elu Gayrettepe-Yeni dị ka ndị a:
Ọ B HGH H AHAL
Ntughari uche rue oge ntụgharị: Percent 40.63
- Kwụọ ụgwọ mgbe ụbọchị nyefe Pasent 59.37
Ọ ga-ekwe omume “gụọ :: N'ọgwụgwụ afọ 2016 site n'ịkpọ oku wee wuo ọrụ nke 2017, nke ekwuputara ka njedebe na njedebe nke 2018, mechara kwụsị na 2019 ma emesịa yigharịrị kwa 2020.
Ọ bụrụ na ikwere na Minister nke Transportgbọ njem, 60 nke metro ọdụ ụgbọ elu emebeghị arụchabeghị n'ime ọnwa anọ na ọkara.
Nọmba ndebanye aha nrịba ama nke 2016 / 504725 Gayrettepe-wasgbọelu ikuku ọhụrụ karịrị Euro ma banye na nkwekọrịta 2016 na njedebe nke 1. Euro taa 3.5 TL.
- New n'Ọdụ nke bụ ndị ọzọ akara nke ọdụ ụgbọ elu obodoHalkalıEdebere nkwekọrịta ya na Özgün Yapı - Kolin İnşaat, ụlọ ọrụ Bayburt Group na March 2018. Ogo nkwekọrịta ahụ dị 4 ijeri 294 nde 713 puku TL. (Otu Euro 4.8 TL dị ka ọnụego mgbanwe nke ụbọchị ahụ.)
NA-AKWAMEKWỌ AMEBAMERAME ADAME
N'oge a, aga m echetara gị otu mmepe pụtara ìhè nke anyị kpọsara ọha na eze ọnwa ole na ole gara aga.
N'oge na-adịghị anya mgbe oflọ Ọrụ Transportgbọ njem bịanyere aka na Özgün Yapı-Kolin İnşaat, nkwekọrịta jikọrọ ọnụ. Cengiz, Kalyon na Kolin guzobere njikọ a na ahiaHalkalı Pasent 80 nke ụzọ ụgbọ oloko.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, Kolin banyere ụlọ ọrụ Bayburt Group wee mebe ụlọ ọrụ na-eme 80 pasent nke azụmaahịa ya na mmadụ abụọ ya na ha na-emekọ ihe (n'ọdụ ụgbọ elu).
N'ụzọ na-enye obi ụtọ, ụlọ ọrụ otu Bayburt Şenbay na Gayrettepe-Yeni Airport, nke bụ akara mbụ nke ụzọ ụgbọ ala 70 km, na-ebufe òkè ya na otu atọ.
Şenbay Madencilik na Özgün Yapı, ha abụọ bụ ndị ụlọ ọrụ Bayburt Group, na-elekọta ọrụ abụọ na-adọrọ adọrọ ma jirizie ụzọ dị iche iche gbanyụọ.
Ọnụahịa metro Gayrettepe-Yeni Airport bụ 6.3 ijeri TL nwere ọnụ ọgụgụ taa. New n'Ọdụ-Halkalı Ọnụ ego nke nkwekọrịta maka ụzọ ụgbọ oloko n'okporo ụzọ na onu ogugu ugbu a (na-eburu ọnụego mgbanwe euro na March 2018) ijeri 5.6 TL. N’aka ozo, anyi na ekwu banyere uzo ugbo ala abuo na uzo abuo nke dicha ihe dika 12 ijeri TL na onu ogugu ugbua.
Kedu ihe na-aga n’ọrụ obodo ukwu dị anyị mkpa iji ruo n’ọrụ kacha mba niile anyị tụrụ anya ka anyị nwee?
Ndị na-emeghe ọdụ ụgbọ elu na-enweghị metro ma kpọọ ya 'smear ın maka nkatọ ọ bụla kwesịrị ịkọwa mbufe a na nnukwu isi ya na isi ihe abụọ na metro nke ọnụ ọgụgụ TL 12.
Kars-Tbilisi Railway Infrastructure and Superstructure Supply Contract Construction Contract was signed with Şenbay Mining - Ermit Engineering Joint Venture 26 / 04 / 2013 Infrastructure Investments ka rụrụ site General Directorate, Turkey - Georgia Kars-Tbilisi Railway Sub na Superstructure Mmecha Construction nke ọhụrụ tolite banyere obi e dere. Dị ka ozi natara site na Investments Magazine; Mgbe mkpebi ikpe ziri ezi nke JCC, ebinyere nkwekọrịta ahụ na Şenbay Mining - Ermit Engineering Joint Venture na 08 April 2013. Dị ka a maara, JCC jụrụ na nso nso a na ọjụjụ nkwenye Comsa - Opening - Seza na Gülermak - Kolin Construction kwadoro maka nsonaazụ nke obi. Ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-akpọ maka obi ebere, nke nwere ọnụahịa dị mma nke 549.266.529 lira, bụ ndị a: Comsa - ...
3.Havalimanı-Gayrettepe Metro ga-ewu Senbay-Kolin Partnership 05 / 12 / 2016 NEW-Gayrettepe Metro xnumx.havalim na Şenbay- Partnership Ndinyene ngwugwu: Istanbul New Airport Okporo ígwè Line Survey-Project akporo ọrụ 3 34 kilomita ogologo Gayrettepe-kilomita n'ogologo na New Airport Halkalı-Ndị dị mma nke okporo ụzọ nke Gayrettepe-Yeni Airport, bụ nke e kpebisiri ike dị ka akụkụ mbụ nke usoro okporo ígwè nke e mere atụmatụ dị ka ọnụ ọgụgụ 65 kilomita, kwubiri. Obi ebere natara 999 nde 769 puku Euro maka Kolin-Şenbay Construction. 2018 nke 3 nke metro na February nke afọ. A ga-emeghe ọdụ ụgbọ elu. Mmetụta maka usoro okporo ígwè iji jikọọ Ọdụ Ụgbọ Mmiri Ọhụrụ nke Istanbul na Şişli-Gayrettepe ka emechara. New Airport-Gayrettepe metro line Şenbay-Kolin Yeni
TCDD Ankara - Istanbul High Speed ​​Train Project Ali Fuat Pasha - Dogancay Akụrụngwa Mee obi Senbay - Ozgun Mining nkwonkwo venture merie 26 / 04 / 2013 Turkish State Railways (TCDD) The General Directorate of Ankara - Istanbul High Speed ​​Train Dogancay Ripaj n'ime akporo nke ngo First Nkebi, Ali Fuat Pasha - si Dogancay (Km 132 + 560-143 + 661 (Back) Part nke Sector Infrastructure Construction Construction obi banyere ọhụrụ tolite e dere. Investments dị ka Journal Order; Şenbay banyere-akwụ ụgwọ 499.405.304,00 obi mara dị ka pound 238.000.000 pound ikele - mbụ Mining merie nkwonkwo ịmalite. mgbe Mmebi nke iwu usoro banye a nkwekọrịta na ụlọ ọrụ na-merie ndị obi. oputara ụlọ ọrụ ndị ọzọ abuana ke obi dị ka ọ na a maara, Cengiz - IC Ictas ka Fera - Koçoğlu Construction Kolin - Gülermak ...
Akara Ịkara Istanbul High Speed ​​Train Project Ali Fuat Pasha - Dogancay meriri obi maka ihe owuwu oru nkwekọrịta aka na Senbay - Ozgun Mining nkwonkwo ịzụ ahịa 24 / 05 / 2013 TCDD Ankara - Istanbul High Speed ​​Train Project Edenyere aka na Şenbay - Özgün Madencilik nke na-enweta obi ebere maka nrụpụta ụlọ n'etiti Ali Fuat Paşa - Doğançay: Doğançay Ripage nke Ankara State Railways Akwukwo ihe omuma nke edeputara banyere oru ihe ndi ozo n'etiti Ali Fuat Paşa - Doğançay (Km: 132 + 560-143 + 661 (Back) Nkebi. Emere nkwekọrịta ahụ na 10 lira na May 2013.
3. Nkwuputa Flash maka ọdụ ụgbọ elu ahụ: Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Dutch 20 / 02 / 2017 NEW xnumx.havalim Dutch ụlọ ọrụ aku na ubi nke oru ngo ngwa e filmed na North Forest Defense, dị ka ozi ọma na website: xnumx.havalim ọhụrụ oru ngo maka anyị mkpesa anyị mere ka ụbọchị, nkọwa na anyị 3. Dị ka anyị mere ka anyị pụta ìhè na akụkọ anyị na ọdụ ụgbọelu, ọrụ a abụghị ọrụ njem; Ka oru EIA akụkọ kwukwara sirkat, North ọhịa nke ezigbo ala na ụlọ na-ewu ụlọ oru ngo ga-ciment mgbe niile kwuputela, anyị na-ewetara. 3. ọdụ ụgbọ oru ngo na-karịsịa na ekenyela nnukwu ala Consortium òtù mara ọkwa ha oru maka ógbè ọchịchị, gụnyere isi gosiri na nke a. N'ezie, a na-akpọ ọrụ X Airport "X Airport" 3. ọdụ ...
Turkey - Georgia (Kars - Tbilisi) Railway Project Old na Şenbay obi maka owuwu nke superstructure ọkọnọ Mining - Ermita Engineering merie nkwonkwo ịmalite 20 / 06 / 2012 General Directorate of Infrastructure Investments March 26 2012 anakọtara àjà ihe mere eme, "Turkey - Georgia (Kars-Tbilisi) Railway Sub na Superstructure Mmecha Construction nke" ọmụmụ metụtara nwale nke obi-enye na dechara. Dị ka ozi natara site na Investments Magazine; Şenbay Mining - Ermit Engineering joint venture merie obi na 549.266.529 na-enye onyinye. Ndị isi na-echere nkwado ikike maka ihe ga-esi na ya pụta, na mgbe nkwenye ahụ dị mkpa, a ga-akpọ ụlọ ọrụ ahụ maka nkwekọrịta ahụ, ka o kwuru. Dị ka a maara, ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-arịọ maka obi ebere, nke nwere ọnụahịa efu nke 711.740.804,09 lira, bụ: 1. Gwa - Mgbasawanye - Mee Mwube 2. ...
Afyonkarahisar - Uşak (Banaz) Ngalaba na Afyonkarahisar Pole Crossing Project jụrụ ọjụjụ JCC, Şenbay - Aga Energy na Pers - Mir Energy - YSE Yapı 11 / 09 / 2015 TCDD Afyonkarahisar - Usak (Banaz) Sector Afyonkarahisar Direct Transition Project JCC Şenbay - Age of Energy na Peasia - Mir Energy - Ann Architecture jụrụ mkpesa nke a nkwonkwo ịmalite nke Turkish State Railways (TCDD) na Enterprise Directorate General "Ankara - Istanbul High Speed ​​Train Project" n'ime akporo "Afyonkarahisar - Usak (Banaz) ịkpụ (km 194 325 + - + 268 si 000 km) Afyonkarahisar Direct agafe Infrastructure Construction Work" e dere metụtara ndị ị nweta nke ọhụrụ tolite. Dị ka ozi ndị Investments Magazine natara; JCC, Senbay - Aga Energy na Pers - Mir Energy - YSE jụrụ nzere nke Njikọ Ọdịmma. Nke a ...
Elmadağ - Ọrụ ụgbọ okporo ígwè Kırıkkale Şenbay Mining - Özgün Yapı nkwonkwo aka merie ikpe 22 / 04 / 2016 TCDD Elmadağ - Kırıkkale Railway Project Şenbay Madencilik - Özgün Yapı meriri nkwonkwo Ụlọnga nke TC General Directorate nke State Railways Administration, nke nwere ọnụahịa efu maka 2013 / 185988 GCC ma nwee ọnụahịa a kapịrị ọnụ nke 826.776.846 TL I (Elmadağ - Kırıkkale) Nkebi nke M (Elmadağ - Kırıkkale) -V7-V9-V10 Viaducts) (Km 15 + 45-440 + ı74) N'ihe dị nro maka owuwu nke Ụlọ Akụrụngwa, Şenbay Mining na Özgün Yapı nọnyeere meriri ikpe maka mkpebi JCC. N'ihi ikpe a, JCC kpebiri ime ihe ndozi iji nyochaa nkwupụta ụlọ ọrụ ahụ. Mkpebi a mere n'oge a ga-enyocha site na TCDD. Doğuş na-adịbeghị anya günler
Ụbọchị emeghe nke Marmaray Project na Ankara-Istanbul High Speed ​​Train Projects na-pụta ìhè 28 / 09 / 2012 Dị ka nkwupụta mbụ ahụ si kwuo, a mara ọkwa mmalite nke Marmaray Project dị ka 29 October 2013. Ewu oru ngo malitere na December 2008. N'ime oru Marmaray, e wuru ụlọ ọrụ 40 na mpaghara Asia na Europe. A na-ewu usoro ahịrị 76.3 kilomita n'ogologo n'okpuru oké osimiri, n'okpuru 13.6 kilomita. A ga-ebugharị 75 puku ndị njem kwa awa n'otu ntụziaka. 2 ọ bụla nwere ike ịkwaga n'ahịrị ndị a na ụgbọ oloko ọ bụla. Mgbe oru ngo ahụ ezuchara, Üsküdar-Sirkeci 4 ga-adị na nkeji. Site na Söğütlüçeşme ka Yenikapı na minit 12, site na Bostancı na Bakırköy na 37 nkeji, site na Gebze Halkalıka 105 na nkeji. Isi: Hürriyet
Esemokwu nke Izmit Bay wetara 28 / 01 / 2015 Izmit Bay jikọtara: Otu n'ime nzọụkwụ kachasị mkpa nke Ogige Izmit Bay, ogidi kachasị mkpa nke Gebze-Orhangazi Izmir Highway Project, ga-ebelata Izmir njem njem na 3.5 awa. A na-adọta onye ndu iji jikọta isi ihe ndị dị na ya iji buru ụgbọala ebe ụgbọ ala ga-agafe. N'ihi ya, akụkụ abụọ nke Ọdọ Mmiri ahụ dị n'otu. Ọ ga-abụ minit 6 iji gafee ụgbọ mmiri Izmit Bay site na mmiri akwa ahụ ga-akwụsị na njedebe nke afọ. N'ọgbụgba nke eriri ndị nduzi nke a ga-eji mee ihe n'igbu ígwè ndị ga-edozi cobbles isi nke ga-ebu ebe ha ga-agafe, amalitela. A na-agbanye eriri ndu ndị a, bụ nke a na-ebu ụzọ kwatuo, na-agbatị n'etiti ụlọ elu abụọ na ogwe aka
Gayrettepe Istanbul Airport Subway Obi
Subzọ ụgbọ elu Gayrettepe Newway
Wayszọ ọdụ ụgbọ elu
Kars-Tbilisi Railway Infrastructure and Superstructure Supply Contract Construction Contract was signed with Şenbay Mining - Ermit Engineering Joint Venture
TCDD Ankara - Istanbul High Speed ​​Train Project Ali Fuat Pasha - Dogancay Akụrụngwa Mee obi Senbay - Ozgun Mining nkwonkwo venture merie
Akara Ịkara Istanbul High Speed ​​Train Project Ali Fuat Pasha - Dogancay meriri obi maka ihe owuwu oru nkwekọrịta aka na Senbay - Ozgun Mining nkwonkwo ịzụ ahịa
Turkey - Georgia (Kars - Tbilisi) Railway Project Old na Şenbay obi maka owuwu nke superstructure ọkọnọ Mining - Ermita Engineering merie nkwonkwo ịmalite
Afyonkarahisar - Uşak (Banaz) Ngalaba na Afyonkarahisar Pole Crossing Project jụrụ ọjụjụ JCC, Şenbay - Aga Energy na Pers - Mir Energy - YSE Yapı
Elmadağ - Ọrụ ụgbọ okporo ígwè Kırıkkale Şenbay Mining - Özgün Yapı nkwonkwo aka merie ikpe
Ụbọchị emeghe nke Marmaray Project na Ankara-Istanbul High Speed ​​Train Projects na-pụta ìhè
Esemokwu nke Izmit Bay wetara